Izindaba - Siyini isikhwama sokuhlanza indwangu?
Siyini isikhwama sokuhlanza indwangu? Umsebenzi wesikhwama sokuwasha ukuvikela izingubo, amabrashi nezingubo zangaphansi ekugaxekeni lapho ziwashwa emshinini wokuwasha, gwema ukuguga, futhi zivikele nezingubo ekuguqulweni. Uma izingubo zineziphu zensimbi noma izinkinobho, isikhwama sokuwasha singagwema ukulimaza udonga lwangaphakathi lomshini wokuwasha. Ngokuvamile, izingubo zangaphansi zabesifazane, ubhodisi nezinto zokwenziwe ngoboya Izembatho zidinga ukufakwa esikhwameni sokuwasha.
Okokuqala, isikhwama esinemishini yokuwasha sihlukaniswe saba mesh enhle futhi enezikhala ezinkulu, nosayizi we-mesh uhlukile. Kusetshenziswa isikhwama esihle sokuhlanza impahla enezinto ezintekenteke, kanye nesikhwama esinamahaba esikhiqiza izinto ezijiyile. Lapho umshini wokuwasha usebenza, ukugeleza kwamanzi kwe-mesh indawo kunamandla, ngakho-ke kuhlanzeke kakhulu kunokusebenzisa isikhwama esihle sokuhlanza impahla. Uma izingubo zingangcolile kakhulu, kunconywa ukuthi ukhethe i-mesh emihle.
Okwesibili, isikhwama sokuwasha singahlukaniswa sibe ungqimba olulodwa, ungqimba oluphindwe kabili nongqimba amathathu, futhi izingubo zezinto ezihlukile zibekwa ngokwehlukana. Ingabuye ihlukanise ingubo ngayinye ukunciphisa ukungqubuzana kwe-fiber.
Okwesithathu, kunezinhlobo ezahlukahlukene zezikhwama zokuwasha, kepha kukhona nezinketho ezahlukahlukene ngokuya ngosayizi wezingubo. izikhwama zokuhlanza ezimise okwephilisi zilungele izingubo zangaphansi nobhodisi, izikhwama zokuwasha ezingunxantathu ezilingana namasokisi zifanele amasokisi, izikhwama zokuwasha zezilindi zifanele amajezi, nezikhwama zokuwasha eziyisikwele zilungele amahembe.
Usayizi wemeshi wesikhwama sokuwasha ukhethwa ngokuya ngobunono bendwangu yelondolo kanye nosayizi wezesekeli ezikuyo. Ezingutsheni ezinemicu emincane yendwangu, kungcono ukhethe isikhwama sokuwasha esinemeshini encane, nezokuhlobisa okukhudlwana, nezingubo ezinefayibha enkulu yendwangu, khetha isikhwama sokuwasha esinemeshini enkulu, esiza kakhulu ekuvikelweni okwezingubo.
Lapho ugeza inqwaba yezingubo, enye yezingubo idinga ukuvikelwa ngokukhethekile, ngakho-ke awukwazi ukukhetha isikhwama sokuhlanza esikhulu kakhulu. Isikhwama esincane sokuhlanza izingubo silungele ukuhlanzwa nokuvikelwa kwezingubo. Uma ufuna ukuvikela izingcezu ezimbalwa zezingubo ngasikhathi sinye, kufanele ukhethe isikhwama sokuwasha esinosayizi omkhulu, bese ushiya isikhala esifanele ngemuva kokufaka ingubo, okulungele ukuwashwa nokuhlanzwa kwezingubo.